Moldavia, Tiorkia: Ny Kinanga Niainan’i Natalia Morar Tao Amin’ny Seranam-piaramanidin’i Istanbul · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 15:04 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, বাংলা, 日本語, عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2008)
Tamin'ny volana Desambra (2007), nosakanana tsy hiditra tao Rosia ilay mpanao gazety, Natalia Morar, ary naverina tany an-tanindrazany, Moldavia, taorian'ny nizaràn'ny gazetiboky Rosiana mpivoaka isankerinandro ny andian-tantarany mikasika ny filazàna fanodinkodinam-bola mivoaka an'i Rosia ataon'ireo manam-pahefana ambony ao amin'ny firenena (eto no misy ny fandikana nataon'ny GV momba ny sedra niainan'i Morar).
Teny am-piandohan'io volana io, niaina zavatra hafahafa tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Atatürk tao Istanbul i Morar (mpampiasa LJ natmorar), izay noresahany (Ros) tao amin'ny blaoginy:
”Voasakana tsy mahazo miditra ato amin'ny firenena ianao, haverina mankany Moldavia ianao izao.” hoy ny mpanara-maso sisintany iray tao amin'ny Seranam-paramanidina Atatürk tao Istanbul nanazava tamiko tamin'ny teny Anglisy, sady nanome ny taratasiko ho anà polisy nantsoina haingana. Nanomboka nino aho fa izay no lahatro: seranam-piaramanidina, fandroahana.
Nentin-dry zareo tany amin'ny biaron'ny polisy aho, notazoniny teo amin'ny 40 minitra teo. Toa nisy Natalia Morar 24 taona tao anatin'ny angon-drakitra nananany, mpampanofa vatana izay vao efa noroahana niverina tany Moldavia teo aloha. Tena ela be ny fotoana laniko nanazavako tamin'izy ireo fa tsy izy aho ary tsy izaho no izy. Vao mainka nampiahiahy azy ireo ny karatra maha-mpanao gazety ahy sy ny taratasy rehetra hafa momba ahy. Mety efa nieritreritra izao ry zareo hoe: ”Mpampanofa vatana mahira-tsaina kosa ity, nahavita hatramin'ny niaro ny tenany tamin'ny alalan'ny antontan-taratasy.”
Nifarana soa aman-tsara izany rehetra izany rehefa nanapa-kevitra ny hampitahà ny laharam-pamantaranay (ID) anay ireo polisy. Navelany nivoaka aho […] sady nanontany tamin'ny fifanaovam-beloma: ”Tiorka ny sipanao, kony eh?” […]